Fanahy Masina Archives - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Tag: Fanahy Masina
Fiomanana ho amin’ny PENTEKOSTA – Fampianarana
Inona moa ny PENTEKOSTA? Ao amin’ny TT dia antsoina hoe « fetin’ny herinandro ». Ny anarany feno dia ny hoe חַגשָׁבֻעוֹת (chag shavu’ot, firavoravoan’ny herinandro na fetin’ny herinandro). Ny dikany ara-bakiteny dia « herinandro » (pluriel). Izy io dia ankalazaina amin’ny faha-6 n’ny volana Sivan, izay matetika mitontona amin’ny volana Mey sy Jona. Ny Shavuot dia 50 andro …
Akon’ny Seminery Nasionaly SALoMa – Aogositra 2017
Faneva: « Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra » Romana 8:14 Notanterahina tao amin’ny Synodam-paritany Toamasina FLM Morarano ny Seminery Nasionalin’ny SALoMa tamin’ity taona 2017. Isaorana an’i Jesosy izany. Noho ny fitiavana sy famindrampon’Andriamanitra moa dia nahazo anjara isika tamin’ny alalan’ny solotenantsika tany an-toerana, Rtoa Tonia SALoMa SP FLME, RANDRIANASOLO Hanitra. 6400 no isan’ireo mpampianatra Sekoly Alahady tonga …
Pentekosta: Fiainam-baovao sy Fiadanana
Miarahaba antsika rehetra mankalaza indray ny Andro Pentekosta! Inona moa ny « Pentekosta »? Fahizay, Andro fetim-bokatra teo amin’ny Zanak’Isiraely ny « Pentekosta »; fanolorana ho an’Andriamanitra izay tsara indrindra avy amin’ny voaloham-bokatra. Fanolorana fanati-pisaorana ho an’i Jehovah, avy amin’ny voaloham-bokatra; dimam-polo andro aorian’ny Paska, fisaorana noho ny fanavotana avy tany amin’ny fanandevozana tany Egypta. Ny Pentekosta dia fety …
TORO-HEVITRA HAMPAZOTO MIVAVAKA – Jaona 16:24
TORO-HEVITRA HAMPAZOTO MIVAVAKA – Jaona 16:24 Indro tompoko atolotra antsika manaraka ity ireo torohevitra hampazoto mivavaka, izay nosoratan’i Pastora EDOANY Govin, Mpitondra Fitandremana ANDROHIBE, ary isaorantsika azy. Manasa antsika Fiangonana hanjohy izany ary ahazo soa amin’ny vavaka ataontsika tokoa. Hoy Jesosy: « Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ ny anarako hianareo; …